Lifestyle – Download Myanmar
May 19, 2021 643 Views0
ကျွန်တော်တို့လို Financial ဘက်ကမဟုတ်တဲ့ သူတွေအတွက် Financial Statement တွေဖတ်ရတာ တော်တော်လေး ခက်ပြီး နားမလည်ပါဘူး။ ဒီသင်တန်းက အဲလို Financial Background ဘက်က မဟုတ်တဲ့သူတွေကို Financial ပိုင်းတွေ ဖတ်တတ...
May 12, 2021 149 Views0
ဒီလိုအချိန်မှာ အလိုအပ်ဆုံး သင်တန်းတစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက် နဲ့ စိတ်ထဲမှာ အနှောင့်အယှက်နဲ့ ဖိအားတွေ၊ ဖိစီးမှုတွေ block တွေကို လျှော့ချပြီး စိတ်ကို ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ သင်တန်းတစ်ခု...
May 11, 2021 529 Views0
Simon Sinek ဆိုတာက Start with Why ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ Author, Coach, Trainer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ထပ်ရေးတဲ့ Find Your Why ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလဲ နာမည်ကြီးတာပဲ။ ဒီ Course က Find Your Why ပ...
May 10, 2021 804 Views0
Audiobooks လို့ခေါ်တဲ့ စာအုပ်ကို အသံနဲ့ ဖတ်ပြထားတဲ့ အသံစာအုပ် collection ပါ။ တော်တော်လေး ရှားပါးတဲ့စာအုပ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ Business book ချည်းပဲတော့ မဟုတ်ဘဲ Bible လို ဘာသာရေးစာအုပ်တွေ၊ The Lord of the R...
May 7, 2021 173 Views0
အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးတွေ ပိုမိုရရှိနိုင်စေဖို့ စိတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်ချက် ၈ ခုကို သင်ပေးတဲ့ ၃ ပတ်ကြာမြင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါ။ (more…)...
May 7, 2021 82 Views0
ခုလို စိတ်ညစ်ညူးတဲ့ ကာလမှာ စိတ်သက်သာရာ နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ရစေဖို့ Unlocking Transcendence အမည်ရတဲ့ Spiritual Fitness Training Program ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (more…)...
May 7, 2021 239 Views0
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အရေးကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့ Presentation, Public Speaking နဲ့ Speech ပြောတဲ့ ပညာရပ်တွေကို သင်ပေးထားတဲ့ သင်တန်းပါ။ (more…)...
The Complete Personal Finance Course Save,Protect,Make More
May 6, 2021 227 Views0
Personal Finance လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ သင်ပေးထားတဲ့သင်တန်းပါ။ တော်တော်လေး စုံပါတယ်။ (more…)...
May 6, 2021 135 Views0
FunnelFlix ရဲ့ သင်တန်းတစ်ခုပါပဲ။ ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ Mindset ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ ငွေရှာရတာလွယ်လား ခက်လား။ စိတ်ကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီး ငွေရှာရလွယ်အောင်လုပ်မလဲ စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ (more…)...
The Legendary Performer 2020
May 6, 2021 83 Views0
Robin Sharma ရဲ့ Leadership သင်တန်းတစ်ခုပါ။ လူတွေကို ဦးဆောင်နိုင်ဖို့၊ performance အမြင့်ဆုံးဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော လူတွေကိုပါ ဘယ်လို positive changes တွေရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာတွေ ပါပါတယ်။ (more&helli...